famokarana boiler dingana sy fanaraha-maso kalitaon'ny boiler ary milina fanaraha-maso boiler ho an'ny boiler ao amin'ny atrikasa sy laboratoara - Xuzhou Double Rings Machinary Co., Ltd.
Double Rings Boiler Major Mamokatra dingana
dingana Mamokatra Process
fanapahana Nampidirina CNC Cutting Machine dia ampiasaina hampihenana ny habeny raha ilaina.
Famoretana ny hafanana Manamboatra fomba fanaovan-tsiran'ny efitrano fandraisam-bahiny, fanaraha-maso ny mari-pana sy ny fitaovana fandraisam-peo, rehefa novorina ho fanidiana
Tapitra ny masinina Endrika vita amin'ny latina vaventy be
Mihidy ny vata Ny fandraisana ny haitao mandroso mafana mandroso, ny fomba fanodinana ary ny teknolojia famaranana boaty dia eo am-pelatanana.
Sipa fantsara Ny fizotran'ny famolahana tsy misy hidiny dia mampihena be ny fatran'ny fantsom-bozaka.
Rolling Ny lozisialy mihosin-tavoahangy CNC mihodina mandeha ho azy mba hampihenana ny tsy fitoviana sy ny zoro amin'ny varingarina mba hanatsarana ny fahombiazan'ny asa sy ny kalitaony.
Welding Arofanina-arc mandeha ho azy, ary mahitsy sy tsara tarehy ny endrik'ilay lasitra.
Fanaraha-maso tsy misy fananahana Ny singa fanerena rehetra toy ny amponga aorian'ny fametahana sy ny fametahana dia tokony hojerena tsy misy fanimbana ataon'ny taratra X mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny las.
ary atsofony Ilay fivoriambe dia natao amin'ny driller
Miara-welding Ny endrik'ilay lasitra dia tsy maintsy ho tsara tarehy.
Fanaraha-maso hidiran'ny hidina ara-batana Ny vokatra vita dia tsy maintsy arahi-maso avy amin'ny fisafoana hidraulika hanatanterahana ny fepetra ilaina amin'ny tsindry famolavolana.
Boiler amin'ny fananganana Ny andohalambo eo aloha dia mandray ny andohalambo misy alàlan'ny rano, izay mampiakatra be ny fifadian-kanina eo anoloana. Mandritra izany fotoana izany dia atsangana ny haavon'ny avaratr'afo, ka ny entona flue dia mihetsiketsika tanteraka ao amin'ny aritoha eo aloha mba hampitomboana ny taratra ao amin'ny faritra misy makiazy; ny andohalambo aoriana dia biriky, ary ny fandrakofana dia azo ovaina. Ny kitay fandoroana dia azo ampifanarahana.
Famonosana hoso-doko Ny fisehoan'ny singa mahafeno fepetra dia voaloko; ny ampahany fonosana ivelany amin'ny boiler diavolavolain'ny press press, ary ny henjana dia tsara; ny hoso-doko dia vita amin'ny fanamboarana varnish, ary ny tarehy dia mamirapiratra, malama ary tsara tarehy.
1 Tatitra momba ny fikajiana tanjaka ho an'ny fitaovana ampiasana aorian'ny fizahana ny masinina fanaraha-maso.
2 100% NDT (fanadinana tsy manimba) ny tatitra amin'ny vilia vy, ny fantsona ary ny fanenona;
3 100% X-ray fisavana fanaraha-maso (lasanty lasantsy): hiantohana ny kalitaon'ny boiler manontolo;
4 Tatitra fitsapana Hydraulika: miantoka ny tsindry miasa sy fiarovana azo antoka;
5 Tatitra fanaraha-maso an'ny antoko fahatelo: avy amin'ny Ivontoerana fanaraha-maso ny fanaraha-maso ny fiarovana amin'ny Fitaovana Jiang Su
6 Mpanamboatra mamokatra ambaratonga-A. Vetivety ny marika fanatanjahan-tena eropeanina CE.
Masinina fanaraha-maso ho an'ny boiler amin'ny atrikasa sy laboratoara
No. Anarana Model Qty
1 Metera fandalinana nomerika karbonika sy solifara HV-4b 1set
2 Lafaoro hafahafa avo dia avo HB 2H 1set
3 Scale Electric JA1003 1set
5 Mizana metalyrafitra XJB-2a 1set
6 Milina fitsapana hidradradrana WE-100 1set
8 Masinina fanandramana fikorontanana JB-30 1set
9 Projet Meter JS 1set
10 X Ray mpamily mpamonjy voina XXH3005 1set
13 Detector triatra ultrasonic CTS-22 2sets